Qodobada Amalie Widerberg ee Martech Zone |
Maqaallada by Amalie Widerberg
Amalie Widerberg waxay u shaqeysaa sidii Suuqge Dijital ah ee FotoWare, oo ah hormuud caalami ah oo iibiya Digital Asset Management (DAM) Waxay haysataa ESST (Bulshada, Sayniska iyo Teknolojiyada Yurub) Masters degree, waxayna saadaalisay in 2021 ay waxbadan u harsan tahay muuqaalka DAM.
Top 5 Isbeddellada Maareynta Hantida Dijital ah (DAM) oo dhacaya 2021
Arbacada, February 10, 2021 Arbacada, February 10, 2021 Amalie Widerberg
U guuritaanka 2021, waxaa jira xoogaa horumar ah oo ka dhacaya warshadaha Digital Asset Management (DAM). Sanadkii 2020 waxaan goob joog u nahay isbadalo balaaran oo ku yimid caadooyinka shaqada iyo dabeecadaha macaamiisha sababtoo ah covid-19. Sida laga soo xigtay Deloitte, tirada dadka ka shaqeeya guryaha ayaa laban laabmay Switzerland intii lagu jiray aafada. Waxaa sidoo kale jira sabab loo rumaysan karo in dhibaatadu ay sababi doonto koror joogto ah ee shaqada fog ee heer caalami ah. McKinsey sidoo kale wuxuu soo sheegayaa macaamiisha ku riixaya dhanka